वर्षमा दुई पटक मात्तिन्छन् ध्रुवे, रोनाल्डो र गोविन्दे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चितवन — समूहबाट निकालिएका ध्रुवे, रोनाल्डो र गोविन्दे नामले चिनिने मत्ता (भाले) हात्ती समय–समयमा मात्तिने गरेका छन् । यी तीन भाइले धेरै जिउधनको क्षति गरिसकेका छन् । मुख्यरूपमा वर्षमा दुईपटक यी मात्तिने गर्दछन् ।
गत एक महिनायता गोविन्दे र ध्रुवेले एक/एक जनाको ज्यान लिइसकेका छन् । यो मौसममा ती हात्तीले जनधनको क्षति बनाउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार ध्रुवे यतिबेला टाइगरटप्स क्षेत्रको रिउ र राप्तीको संगमस्थलतिर छ । गोविन्दे र रोनाल्डो पनि सौरहा र कसरा आसपासमा समय–समयमा देखिने गरेका छन् । तिवारीको भनाइमा ध्रुवेलाई रेडियो कलर जडान गरेकाले यकिन ठाउँ थाहा हुन्छ भने रोल्नाडोलाई रेडियो कलर जडान गरिएको भए पनि अहिले नरहेका कारण यकिन ठाउँ थाहा हुन सक्दैन । तर समय–समयमा यी तीनै हात्ती देखिने गरेको उनी बताउँछन् ।
निकुञ्जले पालेका हात्ती प्रजननमा यी हात्ती प्रयोग हुँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा अधिकांस छावा यिनै तीन मत्ता हात्तीबाट जन्मिएका छन् । यो मौसममा कुहिरो लाग्ने भएकाले निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा हिँड्डुल गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । तिवारीले भने, “यो हात्तीको आक्रमण हुनसक्ने समय भएकाले जोगिएर हिँड्डुल गर्नुपर्दछ ।” निकुञ्ज बाहिर खानाका लागि हात्ती आउन सक्ने समय पनि यो हो । तिवारीले अगाडि भने, “यतिबेला निकुञ्जमा राम्रो घाँस हुँदैन, बाहिर लगाएको खेतीबाली हरियाली देखेपछि हात्ती बाहिर आउन सक्छ ।”
निकुञ्ज संरक्षणमा लामो अनुभव संगालेका संरक्षणकर्मी वेदबहादुर खड्का हात्ती बस्तीमा आइहालेमा होहल्ला गरेर नलखेट्न सुझाव दिन्छन् । धेरैजसो घटना हात्ती लखेट्ने क्रममा हुने गरेको उनी बताउँछन् । कतिपयले मादक पदार्थ सेवन गरेर राँको बाल्दै हात्ती लखेट्ने गर्दछन् । यो आफैंमा जोखिम रहेको खड्काको भनाइ छ । हात्ती आइहालेमा निकुञ्जका अधिकारी र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेर धपाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ११:३१
४ सय ८३ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा
बुटवल — पश्चिम क्षेत्रको लुम्बिनी प्रदेश कोभिड संक्रमणको हटस्पट बन्दैछ । कोरोना संक्रमण फेरि बढ्ने र महामारी देखा‍पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना तेस्रो लहरको तयारी तीव्र पारिएको छ ।
कोभिड संक्रमण बढ्न थालेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड आपत्कालीन सेवा सुरु गरेको छ । कोभिड बिरामीका लागि छुट्टै भवनमा आपत्कालीन सेवा संचालन गरी त्यहाँ २२ शय्या राखिएको छ । कोभिडका लागि ६० शय्या छुट्याइएको अस्पतालमा २० शय्या आईसीयू कोभिडका बिरामीका लागि छ । हाल अस्पतालमा दैनिक ८ देखि १० जना कोभिड संक्रमितहरू उपचारका लागि भर्ना भएका छन् । तर, परीक्षणका लागि दैनिक १ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेको र बिरामी बढ्न सक्ने अनुमानमा चिकित्सकीय टोली तयारी अवस्थामा राखिएको मेसु डा. इन्द्र ढकालले बताए ।
‘दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावले उपचारमा निकै सास्ती भोग्यौं । अक्सिजन अभावले बचाउन सक्ने बिरामीको छट्पटिएरै मृत्यु भयो,’ डा. ढकालले भने, ‘यसपाली त्यस्तो नहोस् भनेर अस्पतालमै दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका छौं ।’
कारोना संक्रमण बढे पनि अहिले खोप कार्डका आधारमा गाडीका गाडी भारतीय पर्यटक तीर्थस्थल र पर्यटकीय स्थल घुम्न आएका छन् । लामो समय भारतबाट आएकाहरूलाई नाकामा गरिएको एन्टीजेन परीक्षणको भरमा प्रवेश गर्न दिँदा कोरोना संक्रमण बढेको हुन सक्ने भन्दै प्रदेशका अस्पतालहरूको तयारी थालिएको स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले बताए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. नन्दुप्रसाद पाठकले नागरिकस्तरबाट सचेतना नअपनाउँदासम्म कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न नसकिने बताए । ‘सरकारले उपचारका लागि भर्ना भएकालाई उपचार गरेर मात्र पुग्दैन । सर्वसाधारणलाई कोभिडबाट बच्न अपनाउने मापदण्डबारे पनि सिकाउने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर‚ सर्वसाधारण मास्क पनि नलगाई निस्फिक्री हिँडेका छन् । जुन गलत छ ।’
यसले अस्पतालमा संक्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा समस्या पो देखिने हो कि भन्ने आशंका छ । ‘प्रभावकारी उपचारका लागि अस्पतालमा चिकित्सक र उपकरणले मात्रै पुग्दैन । व्यवस्थापन पनि ठूलो कुरा हो,’ पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका उपाध्यक्ष लालहरि पाण्डेले भने, ‘कोरोना संक्रमण घरघरै पुगेका र अस्पताल भरिन लागेका बेला अस्पताललाई व्यवस्थापन समितिविहीन बनाउनु दुःखद हो ।’
प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ११:१४